Fiovana amin’ny mpitantana ny Lingua frantsay! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Oktobra 2021 15:23 GMT
Vao tsy ela akory izay i Laila Le Guen no nanapa-kevitra ny hiala tsy ho mpitantana ny fandikan-teny frantsay. Nahafehy tsara ny Lingua frantsay i Laila, izay nanatevin-daharana ny ekipanay Mpitantana ny Fandikan-teny, roa taona lasa izay! Misaotra betsaka, Laila! Nahavita be tamin'ny fitantanana ny ekipa ianao 🙂
Laila dia nanolotra an'i François Noverraz ho mpitantana ny fandikan-teny mpisolo toerana izay ho Mpitantana ny Fandikan-teny hatramin'ny faran'ny taona, ary hanampy mandritra ny fotoana hitadiavana olona manaraka hitantana ny tranonkala! Mpandika teny i François ary mpampianatra teny frantsay manana diplaoma sady efa za-draharaha amin'ny fampianarana teny frantsay ho fiteny vahiny. Tongasoa eto amin'ny fitantanana François!